ढँटुवाहरूको रजगज- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
आखिर ढाँटेको कुरा र टालेको लुगा उस्तै न हो  । ढाँटेको कुरा न त सधैंका लागि ढाँटिन्छ, टालेको लुगाले न लाज छोपिन्छ  ।
प्रधानमन्त्रीको बोली पनि त्यस्तै सावित भयो । तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षणसम्बन्धी पत्र आएको आफूलाई थाहा नभएको भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रलाई ढाँटेको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक
भएपछि स्पष्ट भयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति गएको चुनावको दिनसम्म
जनताको अपार विश्वास थियो । सत्ता सम्हालेको १७ महिनाको कामकारबाही, जनभावना विपरीतका विधेयक र असत्य वाणीले उनको विश्वसनीयता खस्केको छ । पछिल्लो कडी हो– भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई लेखेको पत्र । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी करिब आधा दर्जन सरकारी निकायलाई बोधार्थ दिइएको पत्र र त्यसैको आधारमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय फिर्ता लिइसक्दा पनि कसले पत्र लेख्यो ? कसले पढ्यो ? भन्ने ढँटुवा कुरा गर्नु लाजमर्दो हो । कार्यकारीको निकम्मापन हो । राष्ट्रलाई नै ढाँट्नेलाई कतिसम्म सर्वोच्च कार्यकारी पदमा व्यहोरिरहनुपर्ने हो ? यही अभिशप्त समयमा हामी बाँचेका छौं ।
अब नेपाल–भारतले आआफ्नो देशभित्र विषादी परीक्षण गरेको रिपोर्टलाई दुबै देशले मान्यता दिन्छौं भनी सम्झौता गरेमा दुबैको समान हैसियत पनि कायम हुन्छ र विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्य पनि बिग्रन पाउँदैन।
– गोपाल देवकोटा, गोकर्णेश्वर–८, जोरपाटी, काठमाडौं
काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबाट पत्र आएको धरि थाहा नपाएको बहाना गरी जनतालाई ढाँटेर विष खुवाउन उद्यतहरूलाई के भन्ने ? को प्रति वफादार छन्, यिनीहरू ? शासकको विदेशीसंँग झुक्ने, आफ्ना जनतालाई भुक्ने रवैया उदाङ्गिएको छ । सरकारी प्रवक्ताले पत्र आउनु सामान्य भने पनि पत्रपछि मन्त्रिपरिषदले जुन निर्णय गर्‍यो, त्यो किमार्थ सामान्य होइन । कुनै पनि देशका राजदूतले आफ्नो देश र नागरिकको हितका लागि काम गर्छन् । भारतीय राजदूतको पत्र पनि उनको देशका किसान र व्यापारीका हितका लागि लेखेको हो । तर त्यो पत्रमा उल्लेखित विषयमा दोहोरो संवादसमेत गर्न नसक्ने हाम्रा मन्त्री र सचिवले जस्तोसुकै तर्क दिए पनि क्षम्य हुँदैन ।
– ध्रुवप्रसाद आचार्य, गोठाटार, काठमाडौं
प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:२८
असार २६, २०७६ सीमा तामाङ
काठमाडौँ — ट्याक्सी व्यवसायीले मोबाइल एप्समार्फत यात्रुलाई सेवा दिने तयारी थालेका छन् । यसका लागि उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय तथा चालक सेवा समाजले ‘इजी ट्याक्सी नेपाल’ नामको एप्स विकास गरेको छ ।
अहिले परीक्षणमा रहेको एप्समार्फत युरोप, अमेरिकामा प्रचलित उबर सेवामा झैं अनलाइनबाटै ट्याक्सी बोलाउन सकिने बताइएको छ ।
करिब ५ हजार स्वरोजगार ट्याक्सी चालक रहेको समाजको उक्त मोबाइल एप्समा पहिलो चरणमा ३ हजार ५ सयभन्दा बढी ट्याक्सी आबद्ध भइसकेका छन् । अन्य ट्याक्सी तथा चालक बिस्तारै जोडिँदै जाने समाजका अध्यक्ष सानु पुर्वाछाने मगरले बताए ।
‘एप्समार्फत यात्रुले दिउँसो र राति दुवै समयमा सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘एप्समा आबद्ध चालकको ५ लाख रुपैयाँको दुर्घटना बिमा गरिनेछ ।’ एप्समार्फत सेवा लिने यात्रुले वेबसाइट वा एप्समार्फत केवाईसी फर्म भरे ५ लाख रुपैयाँको दुर्घटना बिमा गरिने बताइएको छ ।
अन्य देशले सञ्चालन गरिसकेको एप्स नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । सरकारलेतोकेकै भाडादर कायम गरिएको अध्यक्ष मगरले बताए ।
उपत्यकामा मात्र सञ्चालन गरिने यो सेवा लिन यात्रुहरूले उक्त एप्स डाउनलोड गरी दर्ता गर्नुपर्नेछ । यसका लागि कस्टमर ‘लग इन’मा थिचेर आफ्नो नाम र नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ । यात्रुले ‘लग इन’ गरेपछि त्यसमा देखिने ‘रियल टाइम म्याप’मा आफू बसेको स्थानदेखि जाने गन्तव्य छनोट गर्नुपर्ने सफ्टवेयर कम्पनी इजी एस्युरेन्सका प्रबन्धक सन्जित पौडेलले बताए ।
यात्रुले एप्समा गरेको अनुरोधका आधारमा नजिकै रहेका ट्याक्सी चालकले त्यसलाई स्वीकार गर्नेछन् । उनीहरूले उल्लिखित यात्रुको मोबाइल नम्बरमा फोन गरी सेवा दिनेछन् । यात्रुले अहिले नगदमै र पछि डिजिटल वालेटमार्फत पनि भाडा भुक्तानी गर्न सक्ने पौडेलले बताए ।
एन्ड्रोइडको प्लेस्टोरबाट डाउनलोड गरेर सेवा लिन सकिने यो एप्स चाँडै आइफोनको एप स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सकिनेछ । यात्रु ठगिने र भाडामा भएका बेथिति हटाउन समाजले एप्स सञ्चालनको तयारी गरेको पौडेलको भनाइ छ । ‘एप्समार्फत यात्रु ठगिने कार्य न्यून हुन्छ,’ उनले भने, ‘डिजिटल भन्नेबित्तिकै महँगो भनिन्छ तर एप्स सरकारी दरमै कायम छ ।’
एप्सबाट गरिएको अनुरोधपछि ट्याक्सीले ५ मिनेटभित्र यात्रु भएकै स्थानमा पुगेर सेवा दिने उनले बताए । उनका अनुसार ट्याक्सी चालकलाई ५ लाखको दुर्घटना बिमा, परिचयपत्र, ड्रेस दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:२५